Apple manolotra iPad Smart Case ho an'ny iPad 2 sy iPad Vaovao | Vaovao IPhone
Toy ny tafaporitsaka minitra alohan'ny Keynote, la iPad Smart Case lasa zava-misy io.
Izy io dia fonosana ampiasaina izay mitazona ny fiasa mitovy amin'ny Smart Cover, izany hoe mamadika sy mamono ny efijery amin'ny fampiasana andriamby sy fampitaovana ho fanohanana.
Ny mahasamihafa ny Smart Cover dia izay ny iPad Smart Case dia miaro ny vodin'ilay fitaovana ihany koa, manakana azy tsy hikorontana isaky ny avelantsika amboniny.
Ny fonony dia efa vita amin'ny polyurethane sy ny ampahany mifandray amin'ny efijery iPad dia manolotra fonosana microfiber izay mitazona azy io ho madio sy tsy misy vovoka isaky ny manidy ny sarony isika.
Io fitaovana ho an'ny iPad 2 sy ho an'ny iPad vaovao Azo alaina 49 euro amin'ny loko enina hisafidianana. Ny ao ambadiky ny tranga dia azo haingoina amin'ny sokitra laser kely azonao angatahina raha mividy ny iPad Smart Case amin'ny alàlan'ny Apple Store amin'ny Internet ianao.
rohy: Mividy iPad Smart Case
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Apple dia manolotra iPad Smart Case ho an'ny iPad 2 sy iPad Vaovao
Solar charger ho an'ny iPhone